Olee otu iji nwetaghachi paswọọdụ Hotmail na ntakịrị aghụghọ | Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | software, Windows
Agbanyeghị nnukwu mmesi obi ike nke Microsoft bịara tinye na onye ozi email ya, a ka nwere ụfọdụ ọnọdụ mmadụ nwere ike ịbanye anataghị ikike Hotmail (ma ọ bụ ihe ọhụrụ Outlook.com), ịnwe maka nke a gbalịa weghachite ya n'okpuru naanị usoro enyere site na mbinye aka.
Maka iwu nzuzo na nche, Microsoft adighi enye uzo ozo a gha eme mgbe ị na-agbake paswọọdụ Hotmail, yabụ anyị kwesịrị ịnwale ịtụle akụkụ ole na ole kwesịrị ịhazi tupu anyị enweta akaụntụ email ahụ. Ugbu a, anyị ga-anwa ịkọwa, ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na n'ihi ihe ụfọdụ anyị enweghị ike ịbanye na ọrụ ahụ.
1 Olee otú iji naghachi Hotmail paswọọdụ ya oru aka
2 Jiri ozi mgbake ọzọ
3 Ozi na mkpanaka
4 Nhọrọ ọzọ
Olee otú iji naghachi Hotmail paswọọdụ ya oru aka
Onwere otu ihe ị kwesiri ime n’oge a ọ bụrụ na e mebiela paswọọdụ gị Hotmail ya mere, ị nweghị ike ịbanye ma ọ bụ banye na ọrụ ahụ. Anyị na-akwado ka ị buru ụzọ gawa kwupụta njikọ ndị a, ebe ị ga - ahụ naanị ụzọ 3 ndị ọzọ Microsoft na - enye gị ma a bịa n'ịgbake ma ọ bụ tọgharịa paswọọdụ Hotmail gị, ndị a bụ:
"Echefuru m paswọọdụ m"
"Amaara m ihe paswọọdụ m bụ, mana enweghị m ike ịbanye"
"Echere m na onye ọzọ na-eji akaụntụ Microsoft m"
Ga-ahọrọ nke ọ bụla n'ime nhọrọ 3 egosiri na ihuenyo ahụ na nke anyị tụrụ aro na mbụ.
Dabere na nhọrọ ị mere, iji weghachite furu efu Hotmail furu efu, echefuru ma ọ bụ nke hacked, Microsoft nwere ike ịjụ gị:
Nọmba ekwentị ịdebanye aha na ntọala akaụntụ.
Ọ bụrụ na ị jisiri hazi ozi ọ bụla na akaụntụ Hotmail gị, ị nwere ike nata koodu, ozi SMS ma ọ bụ ozi mweghachi nke igodo Hotmail na sekọnd ole na ole; Ikekwe dịka ndụmọdụ anyị nwere ike ịtụ aro ka ịhọrọ nhọrọ nke atọ ma ọ bụrụ na ị chere na mmadụ ezuru paswọọdụ Hotmail gị; Na nhọrọ a ị ga - ahọrọ "Ọzọ" ka itinye obere nkọwa nke ihe na - eme; n'ime ozi a echefula itinye adreesị ozi-e ọzọ iji kpọtụrụ gị. Ọ bụrụ na Microsoft ruru mara na enwere ihe omuma (site na adreesị IP n'ime akaụntụ gị), ọ ga-akpọtụrụ gị ozugbo na email ị hapụrụ n'ime ozi a na nhọrọ ikpeazụ a.
Ọ bụrụ na ịnweghị ohere ịbanye na akaụntụ Hotmail gị, enwere ọtụtụ nhọrọ ị ga-esi nwetaghachi ya. Yabụ n'ezie enwere ụfọdụ usoro dabara na ihe ịchọrọ n'oge ahụ, ka ị nwee ike ịnweta akaụntụ ahụ n'oge niile. Nhọrọ ndị anyị nwere dị bụ ihe ndị a:
Jiri ozi mgbake ọzọ
Ihe nkịtị mgbe ị na-emepụta akaụntụ email bụ na anyị ga-enye akaụntụ email ọzọ. N'ụzọ dị otu a, ọ bụrụ na ihe emee, anyị ga-enwe ụzọ ọzọ iji nweta ya. N'ihe banyere Hotmail / Outlook, ha na-ajụkarị anyị maka ozi mgbake, nke nwere ike ịbụ akaụntụ na Gmail ma ọ bụ usoro ntanetị ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na anyị echefuola paswọọdụ, anyị ga-pịa na nhọrọ a na ihuenyo iji tinye paswọọdụ.
Mgbe ị na-eme nke a, a ga-egosi anyị ihuenyo nke anyị nwere ike ịhọrọ usoro anyị chọrọ iji wee nweta nnweta. Ọ na-abụkarị iji email mgbake a. Ihe ha ga - eme mgbe ahụ site na Hotmail / Outlook, bụ zipu koodu kwuru na akaụntụ email. Mgbe ị natara ya, ị ga - abanye koodu a naanị ị ga - enwe ike nwetaghachị akaụntụ. Ọzọkwa, a ga-ajụ gị ịmepụta paswọọdụ ọhụrụ maka ya. Na nkeji ole na ole anyị ga-enwe ike ịnweta ya ọzọ.
Ozi na mkpanaka
Ọ bụrụ na ịnweghị akaụntụ email ọzọ, nke bụ ihe nwere ike ime n'ọtụtụ ọnọdụ, anyị nwere usoro ọzọ dị na Hotmail. Anyị nwere ike iji SMS. Nke a bụ otu ihe ahụ dị na nke gara aga, naanị oge a ka koodu nchekwa ha ga-ezitere anyị zigara anyị na ekwentị mkpanaaka site na SMS. Enweghị ọdịiche ndị ọzọ na nke a.
Ya mere, mgbe anyị banyere ịbanye, anyị ga-pịa na nhọrọ m echefuola m paswọọdụ. E zigara anyị na ihuenyo ọzọ, nke a na-atụ aro ya ka ị jiri email mgbake. Ọ bụrụ na ịnweghị, ma ọ bụ ịchọrọ iji SMS, ị ga-pịa nhọrọ SMS, ọ bụrụhaala na ị jikọtara nọmba ekwentị na akaụntụ na n'oge gara aga. Inye ya ohere iziga SMS na ekwentị gị, nke ị ga-abanye.
Mgbe ahụ ị ga-abanye koodu a na Hotmail, ịmalite usoro mgbake akaụntụ. Mgbe ị nwere ike ịnweta ya, ihe mbụ a na-ajụkarị bụ ịgbanwe okwuntughe. Yabụ na anyị agaghị efunahụ ohere ahụ ọzọ.
O nwere ike ịbụ na nhọrọ abụọ ndị a adabaghị n'okwu gị. Yabụ, ịnwere ike ịhọrọ nke atọ. Na ihuenyo ebe anyị kara akara na anyị echefuola paswọọdụ, anyị nwere nhọrọ a na-akpọ "Enweghị m otu n'ime ule ndị a." Site na ịpị ya, ọ ga-akpọrọ anyị na ihuenyo ebe mgbake akaụntụ na-amalite. Anyị ga-ejupụta ụfọdụ data, nke mere na anyị mechara nwetaghachi ya.
Ọ bụ usoro dịtụ ogologo ma na-agwụ ike, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ihe dị mkpa bụ na anyị ga-enwe ike ịbanye na Hotmai ọzọdị ka nke a. Yabụ naanị ị ga-ejupụta n'ọhịa ha rịọrọ.
Dị ka nhọrọ ikpeazụ anyị nwere ike mgbe niile mepụta Hotmail email.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Otu esi eweghachi igodo Hotmail nke abanyela
Achọrọ m iji naghachi m hotmail na paswọọdụ m
Ezigbo Sonia, ị kwuola na ozi gị site na isiokwu nke ọzọ, na nke a nwere ike ịnọchite anya obere ndidi. Microsoft dị mwute ikwu na-ewe oge iji gosipụta ozi zitere gị site na usoro akwadoro. Ọ bụ ezi echiche ịkwado ihe a chọrọ ọtụtụ oge ka e wee nwee ike iburu arịrịọ a n'uche. Daalụ maka ọbịbịa gị ma anyị chọrọ ka ị nweta ụzọ dị mma maka nsogbu gị.
Ndewo Achọrọ m ịtọgharịa akaụntụ m !!! Enwere m ọrụ m niile dabere na ya. Akwụkwọ Microsoft anaghị enye m azịza. Akwụkwọ ozi ahụ bụ nke m !!! Enwere m ọtụtụ puku nyocha. Kpọtụrụ m na onye ọka iwuchilotegui@gmail.com ma ọ bụ ka Argentina kpọrọ 011-57447038 (ekwentị) biko !!!!!!!
Ndewo, enyi nwere ụlọ ọrụ na onye na-elekọta akaụntụ ahụ zuru ya, yana ozi ndị ahịa niile, gịnị ka a ga-eme?
Enweghị m ike icheta paswọọdụ. Kedu ihe m nwere ike ịme?
Ana m akwado ka ị jiri kuki. Dabere na ihe nchọgharị ị na-eji abanye ozi email gị, ọ bụ ọnọdụ nke kuki ndị a. Daalụ maka ọbịbịa gị.
Ọ B IFR YOU na ịchọrọ ịmekọrịta ọrụ dị oke egwu na nke nzuzo, kpọtụrụ anyị.
ọrụ anyị na-enye
- Email Paswọdu
- Paswọdu maka Social Networks
- Web Pages Paswọdu
- Anyị gbanwee mahadum akara ule
- Anyị na-enyocha okwu aghụghọ
- Anyị na-ehichapụ akụkọ ihe mere eme ụlọ akụ
- Ebe Ndi mmadu no
- Ọnọdụ nke IP'S
AJ QJ OR Ọ B OR Ọ B OR AJ QJ WE A GA-EME G YOU
EBE A . Otu n'ime ihe kachasị mma: FrogRAT NA-EME NA Ọ B AND NA Onye OZI ỌZỌ KWES INR IN NA MALWARE (Margera)
CAN nwere ike ịhụ nkọwapụta nke ihe ngosi a dị egwu na:
Ọ BY nanị NARBTA B WH A NA-ACHCH. OSUO UWA.
zipu ozi iji kpọtụrụ gị
Achọrọ m ịnweta paswọọdụ maka akaụntụ facebook, ị nwere ike inyere m aka? kedu ihe m ga-eme, ọ dị ngwa, daalụ
Zaghachi Julián Medina
OBI3. Ziga ozi ịkpọtụrụ gị. Etosiri m iku ọrụ.
ezi m kwesịrị iji naghachi m email paswọọdụ, ị nwere ike inyere m aka?
Zaghachi heinnert de diaz
Echefuru m paswọọdụ m enweghị ike ịbanye na akaụntụ m, email m bụ missybeli @ hotmail. Kom
Zaghachi ka ivelisse Tejada Rodríguez
Enwere m ngwa ngwa na akaụntụ hotmail m, ha agbanweela ozi niile, ugbu a n'ihi na ọ gaghị ekwe omume iji weghachite ya na njirimara m, agbalịrị m ma ọ nweghị ihe nwere ike inyere m aka
Olee otu m ga-esi nwetaghachi paswọọdụ hotmail m?
Miva mkpụrụ osisi dijo
Etufuru m paswọọdụ hotmail m na m kwesịrị ịgbake n'ihi na ọ bụ ọrụ m
Zaghachi Miva Mkpụrụ
Ihe ngwugwu dijo
Oge ụfọdụ gara aga nwa nwanne m anaghị eji adres hotmail a (junior0613@hotmail.com). No maghịzi paswọọdụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Nsogbu bụ na iPhone na anyị zigara ịrụzi bụ iCloud jikọtara na adreesị a. Cannye nwere ike inyere m aka iji nwetaghachi paswọọdụ ... ana m ekele gị nke ukwuu n'ọdịnihu.
anna apiti dijo
Anaghị m echeta paswọọdụ Hotmail m, ị nwere ike inyere m aka weghachite ya?
Zaghachi anna pantano
Ha kagburu m ma gbanwee ozi niile (email ọzọ na akara ekwentị), ma rụọ ọrụ nyocha abụọ iji kwalite ya ... ọfụma ahapụghị m ...
Mmiri Light dijo
Ndewo, echetaghị m paswọọdụ Facebook m, enwere m ya ka m mepee site na koodu, mana iji mee ụfọdụ mmegharị ha na-ajụ m maka paswọọdụ, anaghị m echeta otu maka ozi Hotmail nke a sị na ọ bụ otu, na akara ekwentị nke m tinyere anaghịzi enwe ya, ọ dị m mkpa ịmata ihe m ga-eme, daalụ !!
Zaghachi Luz marina
N'ehihie, m na-agbalị inwetaghachi akaụntụ m nke m mepere site na laptọọpụ ma meghee ekwentị ma ugbu a enweghị m ike ịmata paswọọdụ. Enyere m kọntaktị email mana enweghị m ike imeghe email m. Enwekwara m email gmail. com wee sị na ha zipụrụ koodu mana ọbịaghị. biko ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inyere m aka kelee gị nke ukwuu
Zaghachi Daniela Ogaz
Ndewo, anaghị m echeta paswọọdụ m na nọmba m tinyere, enweghị m ya ọzọ, mmadụ maara etu esi eme xq na koodu ị na-aga na email ọzọ anaghị enyere aka
Banye ogologo oge gara aga ma ghara iji Hotmail. Otu di na nwunye. Mee m facebook anaghi m echeta akara ekwentị ma ọ bụ email ọzọ onye nyere m aka biko
Abụ m sonia ramirez na echetaghị m paswọọdụ Hotmail m chọrọ ịghachite ya enwere m anọ ahụ anyị kwuru site na ekwentị gara aga, ugbu a enwere m nọmba ọhụrụ biko nyere m aka
hello Enwere m olileanya n'ihi na ha gbochiri akaụntụ HOTMAIL m nke m nwere kemgbe ọtụtụ afọ. Ha na-ajụ m maka data m na-echetaghị na m na-etinye ihe m chere na m tinyere n'oge ahụ. Mana otu n'ime mbọ ndị a mejuru ha ma ha gbochie akaụntụ m. Amaghị m ihe m ga - eme, ana m achọsi ike n'ihi na m na - eji akaụntụ ahụ maka ọrụ ọkachamara na nke onwe m ma onye ọ bụla nwere email ahụ. Amaghị m ihe m ga - eme, anọ m na - elegharị anya na ịntanetị ruo ọtụtụ ụbọchị, na - anwa iziga ozi na Microsolft, mana nhọrọ a ka amachibidoro n'ihi na ha na - ekwu na ibe ahụ anaghịzi arụ ọrụ nwa oge. Ha jiri aka ike gbochie ya na enweghị ndụmọdụ, ma ugbu a, ha akagbuola ya ma amaghị m ihe m ga-eme. Biko, mmadụ enwere ike inyere m aka? Daalụ!!!
Zaghachi Marcela Mezzina
Mgbede, abia m ị rịọ maka enyemaka gị, enweghị m ike itinye ozi email m, nọmba ekwentị m tinyere m anaghịzi enwe ya, echetaghị m ihe ọ bụla gbasara ajụjụ ndị ha jụrụ m iji nwetaghachi akaụntụ ahụ, dịka okwuntughe abụọ ikpeazụ m jiri, na nke a naanị m na-echeta otu, anaghị m echeta ajụjụ nke nchekwa, ezitere ozi ikpeazụ. Biko enwere m ekele maka enyemaka gị ka m kwesịrị itinye email m ngwa ngwa.
Zaghachi Carlos Salazar
N’abalị ọma, anọ m na-achọ ịnweta akaụntụ hotmail ọhụrụ ihe dị ka otu ọnwa ọ na-agwa m na okwuntughe ezighi ezi n’ihi na m na-aza ajụjụ ndị na-abịakwute m ọ na-aga n’ihu na-ahapụghị m, Aghọtaghị m na Ọ emeela m na m na ngwa ngwa na ọ ga-emechibido ya ebe ọ bụ email email ọrụ m, biko ị nwere ike nyere m aka ???